Ducada marxuumka. ? Sannad -guurada, Ahaanshaha Gacaliye Geerida iyo Quruxda badan
Ducada marxuumka. Waxaan ku waydiin karnaa nafahaas naftooda ku haray wadada nasashada weligeed ah si ay u helaan nabad ay u baahan yihiin waqtiga ugu gaaban ee suurogalka ah.
Xaqiiqdii qaar badan oo naga mid ah ayaa dhibaataysan geerida qof aad isugu dhow, dhib malahan hadduu reer ka mid ahaa ama saaxiib ahaa, muhiimaddu waxay tahay inuusan adduunkan sii joogin, wuxuu aaday meel ka baxsan.
Waxaa la yiri hadaadan u duceyneyn qofka dhintay, waxaan sidoo kale ilaawi doonnaa goorta ay tahay inaan wadadaas ku soconno.
Dadka qaar ayaa shumaca shumaca oo waxay sameeyaan meel allabari oo gaar ah oo lagu xusuusto qofkii ay jeclaayeen markay salaadda tukanayaan.
Si kastaba ha noqotee, aaminaaddan ayaa inta badan lagu dhalleeceeyaa kuwa aan fahmin rerkooda oo aan ka yarayn xagga diinta. Dadkani lama maqlo, sidaas ayaan qalbiyadeenna u nadiifinnaa.
1 Waa maxay ducada loo dhinto?
1.1 U ducee qofka dhintay inuu jeclaa
1.2 U duceeya kuwa dhintay
1.3 U duceeya kuwa dhintay sanad-guurada
1.4 Ducada xubnaha qoyska ee dhintay (Catholic)
2 Salaaduhu si wanaagsan uma qaban doonaan qofka dhintay?
Waa maxay ducada loo dhinto?
Waxaa jirta aaminaad ah, in marar badan, dadka dhinta aysan diyaar u ahayn inay wajahaan dunidan, taasina waa sababta aan ugu baahanahay inaan u duceyno qofka dhintay inuu helo nasasho weligeed ah.
Waxaa la rumeysan yahay in jidkaas, qofka dhintay inuu naftiisa ku daahirin karo fikirka xurmada leh sida salaadda.
Caadi ahaan waa caado in la sameeyo salaadaha qaarkood ka dib markii la aaso, laakiin kuma filna in la sii wado kuwan salaadda Waqti dheer iyo xitaa tani waxay caawineysaa murugada iyo xanuunka kala goysyada xubnaha qoyska ama saaxiibkaa.
Waxay na dareensiisaa inaan isku xirno in kasta oo aan fogaanno.
U ducee qofka dhintay inuu jeclaa
Ilaahow adigu naftaada ayaa iska leh nolosha.
Waxaad na siisaa hadiyadda ku dhalatay ujeedo isla sidaas oo kale markii aan u oofinay, waxaad noogu yeeraysaa boqortooyadaada nabada, markaad tixgeliso in hadafkeenna dunidan uu horeba u soo dhammaaday.
Ka hor ama ka dib midna ...
Maanta waxaan jeclaan lahaa inaan hortaada imaado isagoo is-hoosaysiiya oo runti codsigeyga la maqli doono.
Maanta waxaan rabaa inaan codsado naftiisa (magaca dhintay) kan aad ugu yeedhay inuu dhinac kaaga nasto.
Salaada ayaan kuu duceynayaa adiga, mudane, maxaa yeelay xitaa duufaanta ugu daran waxaad tahay nabad aan xad lahayn. Aabbaha daa'imka ah, nasiin jannada naftaada iyo boqortooyadaada sii kuwa mar hore uga tagey diyaaraddaan adduunyo.
Adigu waxaad tahay Ilaah jacayl iyo cafis, cafi guul darrooyinka iyo dembiyada nafsaddan ee dhinac kula jirta oo isaga sii nolosha weligeed ah.
Sidoo kale, waxaan kaa codsanayaa aabbe, kuwa ku kalifay inay u baroortaan ka-tagitaanka qof aan hadda dib u dhicin, qalbigaaga fur oo jacaylkaaga ku dheji. Sii xigmad, si ay u fahmaan waxa dhacaya.
Sii nabad si ay u is dejiso inta lagu jiro xilliyada adag. Sii kalsooni leh si ay uga adkaadaan murugada.
Waad ku mahadsantahay mudane, adoo dhageysanaya maanta ducadan oo cibaado la aan ah oo aan kugula dardaarmayaa, si naxariis iyo nabad galyo, aad nabad ugu siiso kuwa aan haysan waqtigaan.
Ku hag tillaabooyinka dadka hadda isqarxiya oo ka dhig inay ku raaxaystaan ​​farxadda nolosha.
Mahadsanid Aabe, aamiin.
Ma jeceshahay ducada kuwii dhintay?
Dhimashada ka dib, waxaa jira kuwa la hubo, in daqiiqad kale oo isdaahirinta lagu noolaan karo, in aan wax walba lumin laakiin aan haysanno fursad kale.
Ereyga Ilaah waxaan ku aragnaa tixraacyo qaar si loo helo cafis aduunkan ama kan iman doona; Ciise Masiix laftiisa ayaa sidaas ku sheegay mid ka mid ah shirarkiisa mucjisada ah.
Waa run oo aannaan ka baxsan karin, oo aan ahayn beero abuurka oo berrito qof kale ayaa isaguna sidan oo kale innagana yeelaya.
Oh Ciise, raaxada kaliya ee saacadaha nolosha weligeed ah ee xanuunka, waa raaxada kaliya ee faaruqnimada weyn ee dhimashadu u keento kuwa jecel dhexdooda!
Adigu, Rabbiyow, samooyinka iyo dhulka iyo dadku waxay arkeen maalmo murug leh,
Adiga, Sayidow, oo ku qaylinaya waxyaalo aad u jacayl badan qabriga xabaal saaxiib la jecel yahay;
Adiga, oh Ciise! inaad u naxariisatay murugtii guriga go'day iyo qalbi murugaysan oo barooranaya.
Adiga, Aabbaha aad u jecel, waxaad sidoo kale ka xuntahay ilmadaheenna.
Bal eeg iyaga, Sayidow, sida dhiigga nafta dhiiggu u xanuunsanayo, maxaa yeelay khasaaraha kii saaxiibkaa ugu jeclaa, saaxiib aamin ah, oo Masiixi ah.
Sayidow, u fiirso iyaga, sidii wax aannu u bixinno naftaada, si aad ugu nadiifiso dhiiggaaga qaaliga ah oo aad haddana u qaaddo xagga jannada, haddaadan weli ku faraxsanayn!
Fiiri iyaga, Sayidow, si aad noo siiso xoog, dulqaad, u hoggaansanaanta doonistaada rabitaanka ah ee tijaabada weyn ee nafta silcinaysa nafta!
Bal eeg iyaga, macaan, Ciise cibaadada badan! Iyaguna waxay ina siinayaan in kuwa halkan jooga ay ku noolaayeen silsilado aad u adag, oo haddana waxaan u baroorannaa maqnaashaha waqtiga ku-meel-gaarka ah ee gacaliyaha, waxaan mar kale kula kulannaa jannada, si aan weligeen ugu noolaano qalbigaaga.
Shaki la’aan, qurux u duceeya ehelkaa dhintay.
Salaadaha ugu quruxda badan ee qofka dhintay waa kuwa laga sameeyay wadnaha taas oo aan u fasaxi karno wax kasta oo aan wadnaha ku hayno.
Waxaan weydiineynaa nasashadiisa weligeed ah, ee Maheli karaa nabad waxaad ubaahantahay
Teeda kale waxaan sidoo kale weydiisanaynaa inay na buuxiso awood oo aan awoodno Ka adkaato waqtiga adag ee aan ku sii socon karno.
Waxaa jira salaado qaar oo u adeegi kara hagitaan, gaar ahaan xilliyadaas oo ereyada aysan ka soo bixin xanuunka iyo murugada darteed.
U duceeya kuwa dhintay sanad-guurada
Wanaagsanow Ciise, oo noloshaada oo dhan u naxariisatey xannuunnada dadka kale, u naxariiso nafta kuwa aan jecel nahay ee ku jira Rabitaanka.
Ciisoow, kan ku jeclaa doorkaaga weyn, dhegayso baryada aan kuu qabaneyno, iyo naxariistaada ugu deeq kuwa aad ka soo qaadatay gurigeenna inay ku raaxaystaan ​​nasasho weligeed ah oo laabtaada ku jirta infinito amor.
Sii, Sayidow, nasasho weligiis ah iyo iftiinkaaga weligaaba ha kuu iftiimiyo.
Ilaahay ha u naxriisto kuwa aaminka ah naxariistiisa Ilaahay aamiin.
Haddii aad rabto inaad u duceyso xubin qoyska ka mid ah, kani waa salaadda saxda ah ee kuwa dhintay.
Xusuusnow xubin qoyska ka mid ah ama saaxiib ku dhintey taariikh muhiim ah, xaaladaha badankood, waa lama huraan.
Tani waa sababta oo ah waxay ahaayeen waqtiyo dabbaaldeg ah oo aan ahayn qofkaasi inuu dareemo faaruqa, si kastaba ha noqotee waxaa jira salaado ama duco gaar ah oo la sameeyo taariikhahaas.
Karaa sanad guurada dhalashada, aroos ama qaar taariikh kale oo muhiim ah.
Waxa gaarka ah ee ku saabsan waxaas oo dhan waa inaadan iloobin oo weydiiso meel kasta oo aad joogto nabad iyo xasillooni yeelan kartaa iyo tan sii wad inaad sii xoojiso kuwa ka haray diyaaradda dusheeda.
Mararka qaarkood waa caado in lala kulmo xubnaha kale ee qoyska lana tukado salaadda qeybta qoyska, xasuusnow in ereyga Eebbe dhaho haddii labo ama saddex ay sancadahay inay wax weydiistaan ​​Ciise, aabaha jannada ku jira uu ku siin lahaa codsi la sameeyay.
Ducada xubnaha qoyska ee dhintay (Catholic)
Ilaahow, adiga oo iska cafi danbi dhaafka oo doonaya badbaadada dadka, waxaan u baryeynaa naxariistaada adiga iyo walaalahaaga iyo qaraabadaada ka soo baxay dunidan oo dhan.
Iyaga boqortooyadaada sii nolosha weligeed ah.
Tani waa duco loogu talagalay dadka dhintay, laakiin aad u qurux badan!
U ducaynta marxuumka waa mid ka mid ah dhaqamada ugu faca weyn ee kaniisadda masiixiga ay leedahay dunidaWaxay noqotay caqiido in la aamino in dadka dhintay ay joogaan meel lagu nadiifinayo si ay u galaan boqortooyada jannada.
Tani waa meel lagu nasto oo Eebbe abuuray gaar ahaan iyaga, tani waxay ina tusinaysaa jacaylka aan dhamaadka lahayn ee uu Sayidku u qabo aadanaha.
Wadajir qoys ahaan In la tukado qof qoyska ka mid ah oo dhintay ama aan weydiisano Mass halkaas oo aan uga sameyn karno duco iyo duco gaar ah asxaabta iyo xubnaha kale ee qoyska ayaa caado u ah.
Tani waxay sidoo kale u adeegtaa raaxo, calaamad u ah in aanan ilaawin qoyskeenna iyo inaan mar kale isla kulmi doonno.
Salaaduhu si wanaagsan uma qaban doonaan qofka dhintay?
Ujeeddada salaadda kuwa dhintay waa in. Weydiiso caawimaad, caawimaad, badbaadin iyo farxad qofka aan dhexdeena ahayn.
Si wanaagsan bay wax u qaban doontaa. Haddaad ku tukanaysid iimaan iyo jacayl badan waxay u keeni doontaa waxyaabo badan oo wanaagsan, kan dhintay iyo kan labadaba.
Dios, Kala Duwan